Bilow muraayadda muraayadda isla markiiba adigoo isticmaalaya Xarunta Xakamaynta [Pro tip] | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Bilow muraayadda muraayadda isla markiiba adigoo isticmaalaya Xarunta Xakamaynta [Pro tip]
Bilow muraayadda muraayadda isla markiiba adigoo isticmaalaya Xarunta Xakamaynta [Pro tip]
Muuqaalka muraayadda ee waxtarka leh ee lagu dhisay iPhone, iPad, iyo Mac wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u daadiso fiidiyoowga ama shaashadda qalabkaaga Apple TV ama bandhig dibadda ah oo leh taageerada AirPlay 2. Oo waxaad awood u siin kartaa isla markiiba adigoo isticmaalaya badhanka muraayadda shaashadda ee Xarunta Xakamaynta.
Shaashada muraayadda ee iPhone iyo iPad waxay ku fiican tahay ku raaxaysiga filimada, bandhigyada TV-ga, ciyaaraha, iyo in ka badan oo bandhig weyn ah. On Mac, waxay ku siinaysaa isla shaqeynta - iyo sidoo kale awoodda aad ku dheerayn karto goobtaada shaqada shaashadda labaad si aad u hesho boos badan oo abka iyo waxyaabaha kale.
Si aad uga faa'iidaysato muuqaalka, marka hore booqo website-ka Apple oo hubi in qalabkaagu buuxiyo shuruudaha muraayadda shaashadda. Markaa hubso in aaladaha aad rabto inaad isticmaasho ay ku xidhan yihiin shabakad isku mid ah.
Ku bilow muraayadda muraayadda oo leh Xarunta Kontroolka ee iPhone iyo iPad
Haddii aad u isticmaaleyso iPhone ama iPad-ka muraayadda muraayadda, raac tillaabooyinkan:
Open Control Center adigoo hoos uga soo xaaqaya geeska kore ee midig ama shaashadda (ama kor ka kor haddii aad isticmaalayso iPhone ID Touch).
Taabo Muuqaalka Mirroring Badhanka.
Ka dooro Apple TV ama AirPlay 2 TV oo aad rabto inaad muraayad u muujiso liiska qalabka la heli karo.
Haddii lambarka sirta ah uu ka soo muuqdo shaashaddaada labaad, geli iPhone-kaaga ama iPad-kaaga marka lagu weydiiyo.
Si aad u joojiso muraayada shaashadda wakhti kasta, si fudud taabo Muuqaalka Mirroring badhanka gudaha Xarunta Xakamaynta mar labaad.
Taabo badhanka Mirroring si aad u bilowdo.
Ku bilow muraayadda shaashadda adigoo isticmaalaya Xarunta Xakamaynta ee Mac
Haddii aad u isticmaaleyso Mac-ka-muujinta, raac tillaabooyinkan:
Click ah Control Center badhanka ku yaal bar menu-kaaga Mac.
Click ah Muuqaalka Mirroring Badhanka.
Dooro haddii aad rabto muraayad bandhigay Mac kaaga ama sii dheer u gal shaashaddaada labaad. Guji Muuji Dookhyada… doorashooyin dheeraad ah.
Guji badhanka Mirroring si aad u bilowdo.
Waxaad ka beddeli kartaa doorbidkaaga muraayadda shaashadda ee Mac wakhti kasta adiga oo gujinaya badhanka muraayadda shaashadda ee ka muuqda bar menu-ka macOS halka qulqulku firfircoon yahay.
Si aad u joojiso muraayada muraayadda wakhti kasta, si fudud guji Muuqaalka Mirroring badhanka gudaha Xarunta Xakamaynta mar labaad.
Si dhakhso leh u kici ama demi AirDrop adoo isticmaalaya Xarunta Xakamaynta [Pro tip]
Adeegso Xarunta Xakamaynta si aad dhakhso ugu hagaajiso dhalaalka kiiboodhka Mac [Pro tip]